Minisitry ny fiarovam-pirenena : “tsy hatao fitaovana politika ny miaramila” | NewsMada
Nanao fanambarana miaraka ny avy amin’ny minisitry nyFfiarovam-pirenena, ny minisitry ny Filaminana anatiny ary ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, omaly teny Ampahibe. “Manao antso avo ho an’ ireo mpanao politika mba hahay hifampiresaka sy hifanatona hitady vahaolana politika entina hamahana ny olana politika fa tsy fitarihana korontana sanatria. Ny mpitandro filaminana ihany koa, tsy hanaiky mihitsy rafi-pitondrana ivelan’ ny fifidianana”, hoy hatrany ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier. Voalaza fa firaisam-peon’ny telo tonta io fanambarana io. Nohamafisin’izy ireo fa miaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro filaminana fa tsy fitaovana politika, araka ny voizin’ny sasany akory.